Wed, Feb 19, 2020 at 3:52am
बुधबार, १८ बैशाख २०७६,	आहाखबर	3.8K
एजेन्सी, १८ वैशाख ।
आईसीसी एकदिवसीय विश्वकप क्रिकेट प्रतियोगिता सुरू हुन एक महिना बाँकी छ । इंग्ल्यान्ड र वेल्समा संयुक्त रुपमा आयोजना हुने विश्वकपबारे विभिन्न चर्चा भइरहेका छन् ।
यी खेलाडीहरु एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय विश्वकपको खेल करीअरको अन्त्यतिर छन् ।
विकेट लिएपछि हावामा हात फैलाउँदै तिव्रगतिमा कुँदेर सेलिब्रेसन गर्ने दक्षिण अफ्रिकाका लेगस्पिनर इमरान ताहिर यो विश्वकपपछि एकदिवसीय खेलमा मैदान देखिने छैनन् । उत्कृष्ट सेलिब्रेसनका कारण एमरान मैदानमा सधै चर्चामा रहन्थे ।
उत्कृष्ट प्रदर्शनका कारण धेरै लामो यात्रा तय गरेका इमरान यो विश्वकपछि एकदिवसीय खेलमा नदेखिने भएका हुन् । उनी पनि आफ्ना टिममेट डुमिनीजस्तै ट्वान्टी-२० खेलका लागि भने उपलब्ध हुनेछन् । दक्षिण अफ्रिकाका सर्वाधिक सफल स्पीनरमध्येका एक ताहिरले ९८ एकदिवसीय खेलमा १ सय ६२ विकेट लिएका छन् ।
२. सोयब मलिक
सधैँ एकनास प्रदर्शन गर्ने ब्याटसम्यानको परिचय बनाएका पाकिस्तानका कप्तान सोयब मलिकका लागि यो विश्वकप अन्तिम हुनेछ । पाकिस्तानका सफल क्रिकेटर मध्येका एक भेट्रान सोयबले २ सय ८२ एकदिवसीय खेलमा ७ हजार ४ सय ८१ रन बनाएका छन् ।
पाकिस्तानका लागि सर्वाधिक अर्धशतक बनाउने सोयबले १ सय ५६ विकेट लिएका छन् भने ९६ क्याच गरेका छन् । १९९९ मा करीअर सुरुआत गरेका उनले गतवर्ष जुनमा जिम्बाबे भ्रमणका बेला सन्यास लिने घोषणा गरेका थिए ।
३. डेल स्टेन
३५ वर्षीय स्टेन राइट आर्म फास्ट बलरको रुपमा परिचित छन् । गतवर्ष मात्र उनले अन्तराष्ट्रिय क्रिकेटबाट सन्यासको घोषणा गरेका थिए । सन् २००४ मा एकदिवशीय क्रिकेटमा डेब्यू गरेका स्टेनका लागि २०१९ को एकदिवसीय विश्वकप अन्तिम अन्तर्राष्ट्रिय खेल हुनेछ । एकदिवसीय क्रिकेटमा कुल ६ हजार २ सय ५६ बलमा स्टेनले १ सय ९६ विकेट लिएका छन् ।
इंग्ल्यान्डविरुद्धको सिरिजअघि उनले विश्वकप आफ्ना लागि अन्तिम हुने घोषणा गरेका थिए । उक्त सिरिजमा उनले ४ सय २४ रन बनाएका थिए । उनले दूई शतक र दुई अर्धशतक बनाएका थिए । उनले १९९९ मा भारतविरुद्ध एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा डेब्यू गरेका थिए ।
५ .जेपी डुमिनी
दक्षिण अफ्रिकाका अलराउण्डर जेपी डुमिनी ट्वान्टी-२० अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा देखिए पनि यो विश्वकपपछि एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा मैदानमा देखिने छैनन् । घाइते भएको केही समयपछि मार्चमा उनले एकदिवसीय फर्मेटबाट आफू अलग्गिने घोषणा गरेका थिए । तर केही समयपछि उनले घरेलु मैदानमा हुने विश्वकपमा आफू आबद्ध हुने बताएका थिए ।
३५ वर्षीय जेपीले श्रीलंकाविरुद्ध एकदिवसीय अन्तराष्ट्रिय खेलमा डेब्यू गरेका थिए । उनीसँग यस्तो क्षमता थियो तर चोटका कारण उनले देखाउन सकेनन् । तरपनि उनी ५ हजार ४७ रनका साथ दक्षिण अफ्रिकाको शीर्ष १० खेलाडीमा समावेश छन् ।